Ao Hong Kong, Angatahan’ireo Mpikatroka Ireo Toerana Fisakafoanana Mba Hanaisotra Anaty Tolotra Sakafony Ny Lasopy Misy Sombinelatra Antsantsa · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Oiwan Lam Nandika (fr) i Marie Bilau, Françoise Salvador, imanoela fifaliana
Voadika ny 22 Jona 2017 10:52 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, polski, Español, Ελληνικά, 繁體中文, English
Fihetsiketsehana manohitra ny fanjifàna sombinelatra antsantsa, nanoloana ny toerana fisakafoanana Maxim's. Sary an'i PH Yang. Azo ampiasaina raha tsy hitadiavam-bola.
Tamin'ny 10 Jona lasa teo, ampolony maro ireo mpikatrka nanao hetsipanoherana teo anoloan'ny Mazinm's, toerana fisakafoanana lehibe an'ny Vondrona Maxim ao Hong Kong mba hanoherana ny fisian'ny sombinelatra antsantsa any anatin'ny lasopy aroson-dry zareo.
Ireo mpanao hetsipanoherana, nahitàna ankizy marobe niaraka tamin'izy ireo, dia nitondra fitafy niendrika antsantsa tsy nisy sombinelatra sy nasiana pentina mena, dia nihiaka ny hoe : « Raha mitsahatratsy mividy isika, azo atsahatra ihany koa ny fandrpahana ». Betsaka sary avy amin'ny hetsipanoherana nataon-dry hita nivoaka tao amin'ny Twitter.
Goavana ny fahitàna olona avy amin'ny taona rehetra ao amin'ny hetsipanoherana #sombinelatraAntsantsa
Miteny amin'ny fitantanana ny Maxim's ireo mpanao hetsipanoherana mba HAMPITSAHATRA NY FIVAROTANA SOMBINELATRA ANTSANTSA. Habibiana sy TSY AZO TOHANANA izany!
Hetsipanoherana am-pilaminana anoherana ny #sombinelatraAntsantsa
Ny tanànan'i Hong Kong no renivohitra erantany amin'ny varotra sombinelatra antsantsa, ary izy irery dia efa manome ny antsasaky ny tsena isantaona. Ho famaliana fotsiny ny tinady amin'ny sombinelatra antsantsa ho an'ireo latabatry ny shinoa, tsy maintsy mandidy sombinelatra antsantsa miisa 73 tapitrisa isantaona ry zareo. Amin'izao fotoana izao, m,anakaiky ny ampahefatry ny karazana antsantsa sy ireo ‘raies’ no tandindonin-doza ho ringana.
Raha ny fanadihadiana iray tamin'ny taona 2015 nilaza hoe 94 % tamin'ireo olona nanontaniana no tsy naniry hanjifa karazana biby tandindonim-paharingànana, ireo toerana fisakafoanana ao an-toerana kosa mandà ny tsy hanaisotra io sakafo io tsy ho ao anatin'ny lisitry ny sakafo arosony. Amin'ny ankapobeny, ireo mpanjifa manao fampakarambady na mikarakara fampisakafoanana olona no voatery miatrika safidy raikitra izay ahitàna lasopy misy sombinelatra antsantsa amin'ny ankamaroany. Ilay fanadihadiana nataon'ny Hong Kong Shark Foundation, izay natao taminà trano fisakafoanana shinoa niisa 375 tao an-tanàna dia namoaka fa 98 % amin'izy ireo no nanolotra lasopy nisy sombinelatra antsantsa nandritry ny sakafon'ny Taombaovao Shinoa 2016.
Isan'ireo tambajotranà trano fisakafoanana goavana indrindra ao Hong Kong ny Maxim’s ary nanokatra tranobe fisakafoanana niisa 980 any Hong Kong, Shina, Vietnama ary Kambodza. Ny ankamaroan'ireo toeram-pisakafoanana shinoa lehibe ao anatinì'ilay tambajotra misy ao Hong Kong sia mandroso sakafo misy sombinelatra antsantsa avokoa.
Fanangonantsonia iray hitakiana amin'ilay vondrona mba hampitsahatra ny fivarotana lasopy misy sombinelatra antsantsa no manazava ireo anton'ny fihetsiketsehana :
Tsy namaly ilay fangatahana hanesorana ilay lasopy misy sombinelatra antsantsa tsy ho anaty lisitry ny sakaf-o arosony ilay orinasa, tsy niraharaha araka izany ny hetahetan'ireo olompirenana marobe ao Hong Kong, izay manohitra io fomba fanao feno habibiana sy tsy azo tohanana io.
Manamafy ny Maxim’s fa tsy mandroso afa-tsy lasopy miaraka aminà sombinelatra antsantsa manga saingy, araka ny angondrakitra siantifika sasantsasany vao haingana, an-dàlana ny ho ringana ny antsantsa manga noho ny fanjonoana azy ireo tafahoatra loatra.
Hiandry ny faharinganan'ny antsantsa manga va re ny vondrona Maxim’s alohan'ny hanekeny fa misy olana ao?
Ho fanavotana ireo antsantsa sy ny tontolo anaty ranomasina, mila mihetsika ny Mazim's mba hampitsaharana io fomba fanao io, amin'ny alàlan'ny fanesorana avy hatrany ireo sombinelatra antsantsa tsy ho anaty lisitry ny sakafo arosony. Toy ny fanànan'ireo mpanjifa ao Hong Kong andraikitra amin'ny fampitsaharana ny fihinanana sombinelatra antsantsa, dia manana andrkitra ihany koa ireo vondrona toy ny Mazim's amin'ny fampitsaharana ny fivarotana izany.
WildAid Hong Kong, ilay fikambanana ho fiarovana ny zon'ny biby, atidoha nikotrika ireo hetsipanoherana anoherana ny fanjifàna sombinelatra antsantsa, dia milaza ihany koa fa mora ny mahazo ireo hena antsantsa tandindonim-paharingànana “amin'ny fanafarana” izany any amin'ireo trano fisakafoanana ao Hong Kong, toy ny antsantsa-trozona, ny “requins-soyeux”, voarakitra ao anatin'ny Tovana II amin'ilay Fifanarahana momba ny tsenam-barotra iraisampirenena momba ireo karazana tandindonim-paharinganana (CITES).
Isan'ny nanao sonia ny CITES i Hong Kong ary, araka io fifanarahana io, ireo karazana tandindonim-paharinganana ao anatin'ilay Tovana II dia tsy maintsy arahana maso mba « ho fisorohana ny fitrandrahana tsy mifanaraka amin'ny fahaveloman'izy ireny ».
Ao amin'ny pejiny Facebook, manipika ilay fikambanana fa :
Na milaza fa tsy mandroso afa-tsy sakafo ahitàna sombinelatra antsantsa manga aza ny fitantantanana ny Maxim’s any amin'ireo toerana fisakafoanana ao aminy, misy rakitsary nalaina miafina mampiseho fa manolotra an-katakonana karazany hafa ‹ exotiques › ilay orinasa. Raha ny mahazatra dia ny mpiasan'ilay toerana fisakafoanana no mandroso azy ireny, tsy misy ny fankatoavana avy amin'ny mpitantana, mba hamalifaliana ireo mpanjifany tena sarotiny. Ny tsy firaharahiana sy ny tsy fisian'ny mangarahara dia raikitampisaka amin'ireo sehatra rehetra amin'ny fampisakafoanana sahanin'ny shinoa ao Hong Kong, ary ny fanjavozavoan'ny famatsiana ilay orinasa dia fototr'olana ao anatin'ny tsenan'ny sombinelatra antsantsa, diso malaza ho vonton'ny heloka bevava voaomana.
Nandika (fr) i Françoise Salvador